Wasaaradaha Internetka - Qaybta Blog
Kaniisadda New Testament Church
Anagu waxaan nahay kuwo aan madax banaaneyn mana lahaan xarun dhexe ama madaxweyne. Madaxa kaniisaddu waa mid kale oo aan ahayn Ciise Masiix isaga (Efesos 1: 22-23).
Kaniisad kasta oo ka mid ah kaniisadaha Masiixa waa madaxbannaan, waana erayga Ilaah oo naga dhigaya mid rumaysad leh (Efesos 4: 3-6). Waxaannu raacnaa waxbarista Ciise Masiix iyo Rasuulladiisa, mana aha waxbarista dadka. Waxaan nahay Masiixiyiin oo kaliya!
Waxaan ku hadlaa halka ay Kitaabka Quduuska ah ku hadlaan, oo waxaan aamusnaa meesha Kitaabka Quduuska ah.
Warka wanaagsan: Kaabayaasha cusub ee Wasaaradaha Internetka
Waxaan dhammeystirnay dhammaan kambuyuutarrada shabakadayada, waxaana dhawaanahan bilaabay boggeena cusub. Nidaamkan cusub ee internetka waxaa loogu talagalay inuu ka faa'iideysto kaniisadaha Masiixa iyo kuwa raadinaya habka ugu wanaagsan ee Ilaah. Waxyaabaheena cusubi waxay ku jiri doonaan dhowr waxyaabood oo cusub iyo hagaajin kuwaas oo si fiican u adeegi doona kaniisadaha Masiixa ee adduunka.
Our Wicitaanada Dunida ee loogu talagalay kaniisadaha Masiixa ayaa la cusboonaysiiyey waxayna ku jiri doonaan app bilaash ah oo loogu talagalay dhammaan telefoonnada gacanta ee Android iyo Iphones adduunka.
Waxaan ku faraxsanahay mustaqbalka kaniisadaha Masiixa ee internetka. Waad ku mahadsan tahay in mid kasta oo idinka mid ah oo ku jira beerta canabka ah ee Rabbiga. Jacaylkaaga iyo taakuleynta wasaaradeena aad ayaa loo qiimeeyaa.
Fadlan nagu xasuuso salaaddaada annaga oo ka shaqeynayna inaan si fiican ugu adeegno kaniisadaha Masiixa adduunka. Ilaah waa wanaagsan yahay!